Ama-Corporate Kits, ama-Seals, Izitifiketi Zesitoko nama-Corporate Binders
Ikhithi yakho yebhizinisi ibaluleke kakhulu ebhizinisini lakho olifakiwe. Ukugcina amakhophi akho okuqala noma aqinisekisiwe okufakwa noma ukwakheka, kanye namanye amadokhumenti anzima njengamaminithi omhlangano waminyaka yonke, izichibiyelo, amarekhodi e-akhawunti yasebhange, izitifiketi zezitoko namafomu e-IRS. Ikhithi lakho lebhizinisi lakho kanye nencwadi yokurekhoda ihlela imibhalo ebalulekile yezomthetho nezezimali yenhlangano yakho.
Amakhithi ethu ezinkampani eza ecaleni elihle elimnyama leatherette negama lenhlangano yakho lifakwe igolide emgogodleni. Kuhlanganiswe isemthethweni Corporate Seal esemthethweni ebanjwe ngegama lenkampani yakho, isimo nosuku lokufakwa kwayo, incwadi yerekhodi lama Corporate, isibonelo esisethwe yimithetho yedolobha, Amaminithi ezinkampani, irejista yabaqondisi kanye nohlu lwamaphoyisa, irejista yabanikazi bamasheya, irejista yezokuphepha, ababambiqhaza Izivumelwano nezitifiketi eziningana ezenziwe ngokwezifiso zesitoko.
Uku-oda i-Corporate Kit, sicela ushayele uMnyango wethu wesevisi yamakhasimende i-Mon-Fri phakathi kwe-7: 00AM ne-5: 00PM Pacific Isikhathi ku-:
I-800-830-1055 Toll Free
Noma ungasebenzisa ukuhanjiswa kwefomu lethu le-oda lapha: Oda Inhlangano Nge-Corporate Kit
Ikhithi ejwayelekile ye-Corporate & LLC - $ 99
Izinkampani ezifakiwe Izinkampani ezijwayelekile ezihlanganisiwe zenziwe nge-vinyl esezingeni eliphakeme enezinhlamvu ezimbili efakwe uphawu nge-elekthronikhi ngaphezulu kwebhodi elihlala isikhathi eside ukunikela ngempilo yenkonzo ende nokuqina okuphezulu. Umklamo ophezulu kakhulu ovela emuva odonswe kathathu owenziwe ngokuvulwa okumbaxambili kanye nezenzo zokuvala uvumela amakhasi ukuthi ahlale elele futhi aphenduke kalula. I-binder ngayinye ichazwe ngegolide futhi itholakala ngemibala ye-5: i-burgundy, iluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza okwesibhakabhaka, emnyama kanye nsundu futhi kwisitayela se-3: I-Standard Portfolio, I-Standard Slim ne-Standard (I-kit ephelele ene-seal & Izitifiketi)
I-Slim Corporate Kit ejwayelekile - $ 99
Lezi zinkampani Ezihlanganisiwe zenziwe nge-vinyl esezingeni eliphakeme enezinhlamvu ezimbili. Zincane futhi zinciphile kunamakhithi ajwayelekile. Idivaysi ephezulu yokubopha enamakhonkco amathathu asezingeni eliphansi enokuvulwa okumbaxambili kanye nokuvala ama-boosters yenza amakhasi aqambe amanga futhi awavumele ukuba ajike kalula. Ikhwalithi ngayinye yekhwalithi ichazwe ngegolide futhi itholakala ngemibala ye-5: mnyama, nsundu, luhlaza okwesibhakabhaka, luhlaza okotshani nokugqekeza ((Qeda kit nge-seal & Izitifiketi)
Iphothifoliyo ejwayelekile noma i-LLC Kit - $ 99
Ukuvalwa kwe-Flap Flap yeVelcro kuzogcina yonke imibhalo yakho isendaweni. Lawa makhithi akhiwe nge-vinyl esezingeni eliphakeme enamakhasi amabili. Izindlela ezisezingeni eliphezulu ezifakwa emuva ezintathu-zokufaka izindandatho ezinokuvulwa okuphindwe kabili nokuqinisa ama-boosters zivumela amakhasi ukuba alale futhi aphenduke kalula. Ikhwalithi ngayinye yekhwalithi ichazwe ngegolide futhi itholakala ngemibala ye-5: mnyama, nsundu, luhlaza okwesibhakabhaka, luhlaza okotshani nokugqekeza ((Qeda kit nge-seal & Izitifiketi)
I-Linen Corporate noma i-LLC Kit - $ 119
Izimbambo zethu zelineni elakhiwe ngezandla, ezisindayo zenziwe ngelineni esezingeni eliphezulu, ezibenza bahluke futhi babe nenhle. Isigaxa ngasinye sakhiwa ngezinto ezisindayo zokuqina okude nempilo ende. I-binder ngayinye yekhwalithi ichazwe ngegolide futhi itholakala ngemibala ye-3: emnyama, emnyama ne-burgundy futhi emnyama nengwevu. I-Kit Linen Corporate Kit (I-Kit ephelele enezimpawu nezitifiketi)
I-Docu-Box Corporate noma i-LLC Kit - $ 119
Yakhelwe kusuka kubhodi ye-commercial-grade, i-heavyweight pasted chipboard, lokhu kwakhiwa okuyingqayizivele kunikeza isivikelo ngaphandle kwesidingo seslipping esihlukile. I-Dollu-Box ngayinye itholakala ngemibala ye-2: imnyama ne-burgundy. (I-kit ephelele eno-seal nezitifiketi)
I-Zippered Portfolio Corporate noma i-LLC Kit - $ 130
Lawa makhithi we-zippered ezinkampani angukhetho oluhle kulabo abafuna i-portfolio binder. Imiphetho ye-Sewn, ukuvalwa kwe-zipper namakhona wensimbi kwenza lezi zembatho zikhetheke ngendlela emangalisayo. Igama lenhlangano liqoshwe epuletini lethusi le-chrome. (I-kit ephelele enezimpawu nezitifiketi)
I-Blumberg Red Russia Leather Corporate & LLC Kit - $ 485
Khombisa ubunzima bakho kubatshalizimali abangaba khona, ibhange lakho, i-CPA kanye nabameli. Igama lesikhumba esihle seRed Russia, kufakwa kuso, le ncwadi enesisindo esithe xaxa, equkethe izinto eziphakeme kakhulu iyithuluzi lezinkampani elingathengwa kakhulu. Uma u-oda, uzocacisa igama lenhlangano oyifunayo kuzitifiketi, uphawu bese lugxivizwa ngesandla ku-24K igolide emgogodleni. Futhi, bonisa isimo nonyaka inhlangano ehlelwe kuyo. Le khithi iza ne-20 esezingeni eligcwele, izitifiketi ezinenombolo ezinamaphepha egcwele iphepha eliprintiwe ngegama lebhizinisi, isimo, iziqu zesiginesha kanye capitalization. Unga-oda ezinye izitifiketi njengoba kudingeka. Kwamabhizinisi noma ama-LLC. Iza nemizuzu yenkampani ephrintiwe kanye nemithetho yedolobha. (I-kit ephelele enezimpawu nezitifiketi)
Isitifiketi sokuma okuhle
Uhlelo lweHhovisi eliSebenzayo
Iziqu Zakwamanye Amazwe
Ungahamba kanjani Esidlangalaleni - i-IPO, i-Reverse Merger, kanye nama-Shells Omphakathi
Abaqondisi Abaphethwe kanye Nezikhulu
Insizakalo Yomenzeli Obhalisiwe
Ukhetho Lwesikhungo S
Kuyini i-I Direct Directed IRA?
Izindawo Zokuncishiswa Kwentela